Uyifaka njani iHeimdall kwiinkqubo zeLinux | I-Androidsis
Heimdall, yinkqubo yasimahla Vula Umnikezi zifumaneke kubo bonke iinkqubo zokusebenza, esinokuthi ngayo khanyisa iqela leetheminali zosapho ze-Samsung Galaxy.
Kwisifundo esilandelayo ndiza kufundisa abasebenzisi beLinux, ngakumbi abasebenzisi be-Ubuntu, ukuya uyifaka njani le nkqubo imangalisayo yokudanyaza enye indlela kune odin kwaye ngenxa yoko akufuneki uxhomekeke Windows.
1 Yintoni esiyifunayo?
2 Ukufaka iHeimdall
3 Uyisebenzisa kanjani iHeimdall ukukhanyisa i-terminal yakho
Siza kudinga ikhompyuter ene distro de Linux ngenxa ye Ubuntu o Debian.
Okokuqala kuyacetyiswa ukuba bobabini bahlaziye iiphakheji zokugcina ngomyalelo sudo apt-get update, indlela yokuhlaziya iinkqubo nge sudo apt.get ukuphucula.
Nje ukuba kwenziwe oku, singaya kwi ufakelo lwenkqubo.
Ukufaka Heimdall kuyimfuneko kuphela ngenisa iphepha elisemthethweni kunye nokukhuphela iifayile ze-.deb ezimbini.
Nje ukuba sibe nazo, siya kuzifaka ngokufikelela kwifolda yokukhuphela usebenzisa umyalelo Ukukhuphela i-cd, emva koko siya kwenza ufakelo sisebenzisa umyalelo Isudo dpkg -i kunye negama lefayile nganye .deb.
Nje ukuba oku kwenziwe ngeefayile ezimbini siya kuchwetheza umphambili-wangaphambili ukwenza Heimdall.
Kwividiyo yentloko Ndizicacisa ngakumbi.
Uyisebenzisa kanjani iHeimdall ukukhanyisa i-terminal yakho
Ukutshintsha i-terminal yakho nge HeimdallKonke okufuneka ukwenze kukulandela amanyathelo kule vidiyo ilandelayo, kwinxalenye yokuqala ndikubonisa inkqubo yofakelo Windows, kodwa kweyesibini ndicacisa ngokweenkcukacha ukuba zibekwa njani iifayile ezahlukeneyo zefayile ye- I-firmware yoqobo eyayifakwe ngaphambili:
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyifaka njani iHeimdall kwi-Ubuntu 12.04, Uyisebenzisa kanjani iHeimdall kwiWindows
Khuphela - Iwebhusayithi esemthethweni kaHeimdall
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyifaka njani iHeimdall kwiLinux
Ukubuyela umva sitsho
Enkosi kakhulu kwisifundo. Kulungile, kodwa ndibona icala eliphantsi: Ndilandela onke amanyathelo kwaye isebenza kakuhle, ingxaki kukuba xa ndiqala ukusebenzisa inkqubo, ayiyiboni ifowuni yam, ke ndizama ukulandela amanyathelo kwividiyo kwaye… Owu! Yothusa isifundo sendawo yeLinux kodwa inkqubo iyavela (zadig.exe) esebenza kwiWindows. Ndicinga ukuba kufundiswa isifundo seLinux, onke amanyathelo kufuneka asebenze kuloo ndawo. Ukuba uyazi nayiphi na enye indlela kaHeimdall yokuqonda i-smartphone yam kwindawo yeLinux, ndingayixabisa ngokwenene.
Molo, enkosi ngeTuto. Yazi nje ukuba ungayilayisha njani iRom kunye nefayile enye? Ndine-Samsung Galaxy SII.
U-Ibrahim Barfull sitsho
Ndinengxaki efanayo neRves, ndilindele impendulo yakho !!!
Phendula u-Ibrahim Barfull